Muxuu ka yiri Cristiano Ronaldo xili ciyaareedkiisii ugu horeeyay ee kooxda Juventus?? – Gool FM
Muxuu ka yiri Cristiano Ronaldo xili ciyaareedkiisii ugu horeeyay ee kooxda Juventus??
Dajiye June 15, 2019
(Yurub) 15 Juunyo 2019. Xiddiga kooxda Juventus ee Cristiano Ronaldo ayaa dareensan inuu ku qanacsan yahay wax walba uu xilli ciyaareedka 2018/2019 ka sameeyay naadigiisa Bianconeri iyo xulkiisa qaranka Portugal.
Ronaldo ayaa kula guuleystay kooxdiisa Juventus horyaalka Serie A, wuxuuna sidoo kale u hor seeday inay ka qaadaan AC Milan Supercoppa Italia, halka heer caalami marka loo fiiriyo uu xuliiisa Portugal kula guuleystay koobka UEFA Nations League.
Cristiano Ronaldo ayaa qoraal uu soo dhigay boggiisa rasmiga ah ee Instagram-ka wuxuu ku sheegay:
“Alla muxuu ahaa xili ciyaareed aan la ilaawi karin, tijaabo cusub, koox weyn iyo magaalo soo jiidasho leh, rikoorro cajiib ah iyo 3 koob”.
“Waxaan doonayaa inaan kaga mahadceliyo taageere kasta ee kooxda Juventus ah qaabka ay ii soo dhaweeyeen, waxaad kaalin weyn ku leedihiin guulahaan oo dhan”.
“Sidoo kale waxaan u mahad celinayaa taageerayaasha reer Portugal oo naga caawiyey inaan gaarno guulo cusub oo taariikhiga ah”.
“Waxaad boos qaas ah ku yeelan doontaan qalbigeyga, mana iloobi doono dhammaan daqiiqad kasta ee farxad ah iyo rikoorradii aan gaaray 2019”.
Intaas kaddib Cristiano Ronaldo ayaa boggiisa Instagram-ka ku soo bandhigay qaar ka mid ah guulihii uu gaaray xili ciyaareedkii 2018-2019 oo ay ka mid ahaayeen, abaalmarinta ciyaaryahanka ugu fiican horyaalka Serie A, iyo sidoo kale rikoorro kale ee qaas u ah ay ka mid ahaayeen, (Ciyaaryahankii ugu horeeyay ee gaara 100 guul iyo 125 gool oo tartanka Champions League ah).
Gabdhaha England oo iska xaadiriyey wareegga 16-ka Koobka Adduunka kaddib markii ay garaaceen dhiggooda Argentina… + SAWIRRO
Hazard oo fariin u diray taageerayaasha Real Madrid, kaddib imaatinkiisa garoonka Santiago Bernabeu